sexy မော်ဒယ် နွယ်နွယ်ထွန်း & ရွှေစင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » sexy မော်ဒယ် နွယ်နွယ်ထွန်း & ရွှေစင်
sexy မော်ဒယ် နွယ်နွယ်ထွန်း & ရွှေစင်
Posted by ဘဲဥ on Apr 30, 2012 in Copy/Paste | 45 comments
ဂလု ဂလု .. ဂု ဂု…
ဂီဂီ က ” ဂလု ဂလု .. ဂု ဂု… ” နှင့်ပဲ တော်ပြီ ကျေနပ်ပြီလား ။
အင်း ၊ အဘ တို့သာ အသက် ပြန်ငယ်လိုက်ချင်တော့တယ် ။
ရန်ကုန် ရောက်တုံးလေး မော်ဒယ် နွယ်နွယ်ထွန်း လေး နှင့်
—– မလုပ်သွားတော့ဘူးလား ။
မသကာ ကုန်လှ ၁၀၀၀ / ၂၀၀၀ ပေါ့ ။
( —– = မေါ်ဒါယ် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခြင်း ) ;P
အဘ ဖောရေ… အရင်ကတော့ သူက ၁၅ သိန်းတဲ့ အဘရေ…အခုတော့ ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲတော့ မသိတော့ပါဘူး..။ ရွှေစင်ကတော့ စပွန်ဆာ ကောင်းကောင်းတွေချိတ်မိတော့ ဈေးမနည်းဘူးဆိုပဲဗျ..။
ဂလု … ဂလတ် .. ဂလုပ် …
လုပ်အုံး ငထုံးရေ……. နင်ကုန်ဘီဟ
ကြော်ငြာသည့်သဘော၊ ရောင်းလိုသည့်ဟန် ဖြစ်မည်ထင်၏ ၊
သူက lucky girl ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတာနော်…
နွယ်နွယ်ထွန်းရေ ဘာလို့နာမည်ကြီးတာ လဲဆို ကိုယ့်ကို ကိုယ်မသိဘူးဆိုရင် မှန်ထောင်ပီးသာကြည့်ပါတော့အေ
She go with new way and use freedom.
စိုင်းမော်ဝ် ခိုဆိုရရင်ဖြင့် ပဝါပါးပါးလေး ကွယ်ထားလို့ ပါဗျ
အ၀တ်စ2တောင်န`့ တင်ချိုးခြံပြီး ၀တ်တတ်ပါပေတယ်တ`့။ ကြားဖူးသောစကားလေးတစ်ခွန်းပါ။
အခုတော့ 2တောင် တောင်မဟုတ်တော့ဘူး။
အ၀တ်စလေး1စန`့ တကိုယ်လုံးလုံအောင်ကို ချွေတာကုန်မူကြကုန်သော
မြန်မာမိန်းကလေး စစ်စစ်တွေပါ ဇော်ဂျီးရေ့
အမလေးလေး ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ ၀တ်စရာတွေ သူခိုး ခိုး နောက်ကြွက်တွေ ကိုက်သွားလို့ မရှိရှိတာ
လေးဝတ်ထားရတာတင်တယ် ။ အပေါ်ပုံတွေမှာ ဆိုရင် ပုဝါလေးပဲ ခြုံထားတာ ။အမြင်မတော်တာအေ….
ရှိသေးလားဟင် ပိုပေါ်တဲ့ ပုံတွေ ဟီးးးးးးးးးးး
ပုံတွေက အများကြီးကျန်သေးတယ် ကွန်မကောင်းလို့ နည်းနည်းပဲတင်နိုင်တာ ခွေးလွှတ်ဗျို့…..
အိမ်းကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ် ကြည့်ရတာပြီပုဝါခံနေသလိုပဲ ပုဝါမပါရင် အအေးပတ်မလားမသိ (မျက်စိပြောပါတယ်)
ရွာသားတွေတောင် ဓာတ်ပုံဆရာအလုပ် ပြောင်းလုပ်ချင်ကြပြီထင်တယ်……..။ ဆိုးဘူးနော့…။
အစိမ်းရေင် ဇါပ၀ါလေး ကပိုမိုက်တယ်နော့်
ကြည့်ရင်းနဲ့ —အေ့ ၊ နှစ်ယောက်စလုံး—အေ့— ရေ ရေ တစ်ခွက်မြန်မြန်ပေးပါဟ–၊
အော် သဘာဝရေစီးကြောင်းကြီးဆိုဒါ- တိမ်တဲ့နေရာတိမ်၊နက်တဲ့နေရာနက်၊
ထွန်းတဲ့သောင်ပေါ် တက်ပြီး စိုက်ကြ၊ပျိုးကြ ၊ ဘ၀ ဆိုဒါ အမြှုပ်တစီစီ ထတဲ့ရေပူပေါင်းကလေးတွေလို
အဲလို မပေါ့်တပေါ် မခို.တရို.ပုံလေးတွေကမှ ကြည့်လို.ကောင်းတာဗျ..ဗြောင်ရှင်းကြီးကျတော့လည်း
ပုံတွေကလည်း နည်းလိုက်တာ..များများလေး တင်ပေးပါဗျ
ကွန်မကောင်းလို့ပါဗျို့ ဒါတောင် နှစ်နာရီလောက်တင်လိုက်ရတာ
အဲ … ၀တ်ချင်တာဝတ် …လွတ်လပ်ခွင့်လို့ အော်နေတဲ့ သူတွေ … သူတို့ ညီမတွေ ၊ အစ်မတွေကို ပေးဝတ်ရမယ် … ။ မေ့လို့ ..ကိုယ်တိုင်ဝတ်ချင်လည်း ရတယ်နော် .. အဟဲ
ဖြဲဒီးမက ဝတ်ပြမယ်ဒဲ့ အာပျိုဂျီးရေ့ ….
ဒီထုံးဘဲဥကဒေါ့ရောင်းကောင်းနေတယ် လူကြီးတွေစိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖစ်အောင်သိပ်လုဒ်တာဘဲ (ရှိရင်ဆက်တင်နော် သူကြီးမဆဲမခြင်း သူကြီးကဆဲမှာဒေါ့မဟုတ်နိုင်ဘူး သူကပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးတာဆိုဒေါ့ကာ)
ဟဲ့ ဟဲ့ သများက ခြေရာဖျောက်ထားပါဒယ်ချိုနေ လိုက်ဖေါ်နေဒယ်
သွား …. လူဇိုးဂျီး
ဟုတ်ပါ့ မ်ိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအရှက်ကိုမရှိတာ တော်တော်တရားလွန်တဲ့ မိန်းမတွေ မိန်းမေတွေဆိုတာသူတို့၂ယောက်ကိုပြောတာနော်
ဟုတ်ပါ့ မ်ိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအရှက်ကိုမရှိတာ တော်တော်တရားလွန်တဲ့ မိန်းမတွေ မိန်းမေတွေဆိုတာသူတို့၂ယောက်ကိုပြောတာနော် ၁ယောက်ထက်ကျော်သွားလို့မိန်းမတွေလိုပြောလိုက်တာနော် သူတို့ရှက်ကြောတွေမရှိတော့ဘူးနဲ့ တူတယ်
သာမီးဒို့ဂ မွေးဂဒဲဂ ရှက်ကြောနဲ့ ချက်ကြော မှားဖြတ်ထားတာပါချင့်
ဟာ…….. မိုက်ထှာကွ…။ ဒါကတော့မချဉ်ဘူး ချိုလိမ့်မယ်အေ့…… မယုံရင်မြည်းကြည့်ပါလား
နွယ်နွယ်ထွန်းတို့ sexy လိုက်ပုံကတော့ ရွှေစင်တောင်လိုက်မမှီတော့ဘူးပဲ ကိုး။ ကောင်းလှောင့်တေးကောင်းလှောင့်တေး။ စကားမစပ်တခုသိချင်လိုက်တာ။ နွယ်နွယ်ထွန်းမှာ မိဘ မောင်နှမများ ကောရှိသေးလားလို့။
အဟမ်း ၊ နွယ်နွယ်ထွန်းလေး ရဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ ဖြစ်ချင်လိုက်တာဗျာ ။
အပေါ်ဆုံးက စတိုင်နဲ့တော့ ..
နာတို့ ရွာကို မလာနဲ့ ကလေးမရေ ..
နာတို့ အညာက နွားဂျီးတွေက အနီဆို သိပ်မုန်းဒါ ..
တော်ကြာ ပြေးခွေ့မှ အဝတ်တောင် မကပ်နိုင်ဘဲ နေဦးမယ် .. :D
နာကတော့ မုန်းပါဘူး ..
နီနီ စိမ်းစိမ်း တုန်လုံးခိုက်ဒယ် .. :D
အော်…အနှီးစ အနှီးစ အဲ့ယောင်လို့ အနိစ္စ အနိစ္စ…
hinthar maung says:
ရွှေစင်ဆိုတဲ့မော်ဒယ်ကိုဝေဖန်ရင် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းအောက်တန်းကျကျ ပြန်ချေတဲ့သူအကြောင်း
gpad1234Apr 4, 2012 09:34 AM
Yo YoApr 4, 2012 10:20 AM
Cow Boy From HellApr 10, 2012 09:39 AM
မင်း အမေလဲ အဲလိုမျက်နှာလေးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မင်းကိုမွေးလာ တာပဲ သဘောပေါက် လား
paulApr 10, 2012 07:29 PM
ဒါဆို မင်းအမေကိုလည်း အဲလိုဓါတ်ပုံလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါဦးလား။ မင်းအဖေနဲ့စုံတွဲဆို ပိုကောင်းမလားပဲ ဟက်ဟက်
Cow Boy From HellApr 11, 2012 01:59 AM
ဘယ်က လာ ငါ အဖေ နဲ့ မင်းအမေ စုံတွဲဆို ပိုလိုက်တာပေါ့ ဟက်ဟက် .. ငါလဲ ဝင်ပါပေးမယ်
KellyApr 4, 2012 05:06 PM
NO CLASS. WHAT A SHAME GIRL. MYANMAR CELIBRITY, PLEASE STOP POSTING THIS KIND OF PHOTOS. FOR WHAT? FOR GUYS TO JERK OFF BY SEEING THEIR BUTTOCKS AND ANYWHERE THAT IS EXPOSED? SHAME ON THE GIRL AND SHAME ON MYANMAR CELIBRITY ADMIN!
Cow Boy From HellApr 10, 2012 09:49 AM
၂၀၁၂ ရဲ့ အရီရဆုံး ကွန်မန့် ပဲ …သူတို့ ဘဝနဲ့ စားဝတ်နေရေး က ခများဘဝ ကို ဘာ လာ ထိခိုက်နေလို့ လဲ … မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ကိုယ့် ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျဘုပြော လူတန်းစားပဲ .. ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘယ်ခောတ်က ပေတံ နဲ့ တိုင်းတာလဲ .. ခများဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်မော ကျ ကျန်နေခဲ့ ပြီး မနေ့ တစ်နေ့ က မှ အိပ်ယာက နိုးလာတယ် ထင် တယ် ..ကိုယ့် ဘေးကိုယ်လဲမျက်လုံးဖွင့် ပြီးလိုက်ကြည့် ပါဦး ..သူ့ ဘဝနဲ့ သူ ကိုယ့် ဘဝနဲ့ ကိုယ် ပါပဲ ..အကောင်းမြင်သူကို ကောက်ရိုးပုံစောင့် တဲ့ နွားလို့ ပြောကြတယ် .. ဖြန့် ထွက်တွေးခြင်းနည်းနဲ့ တွေးလိုက်ရင် အဆိုးမြင်သူတွေဟာတကယ် တော့ ခွေး တွေပါပဲ .. အီစွတ်ပုံပြင်ထဲ က စပျစ်သီးချဉ် တယ်လို့ ပြောတဲ့ မြေခွေးအကြောင်း သိမှာပါ ..
Cow Boy From HellApr 10, 2012 10:00 AM
လေးစားရပါသော Admin များခများ .. ဒီလို ပုံမျိုးတွေ ကိုများများတင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒါတွေအားလုံးက မီဒီယာထဲ က အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ ..သတင်းအချက်အလက်ဆိုတာ စီးဆင်းတက်တဲ့ သဘောရှိပါတယ် .. ခများတို့ ရင် ထဲ က နေ User တွေ ရင်ထဲ ကို စီးဆင်းခွင့် ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် .. အကောင်းအဆိုးဆိုတာ လိုတာကို သယ်…. မလိုတာ ကိုဖယ် ထားခဲ့ ရုံပါပဲ …. ကိုယ့် ဘဝ ကို သူ့ များစရိုက်လွမ်းမိုးတာ ခံရတယ်ဆိုကတဲ က ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ညဏ်ခံအားနဲလို့ ပါ .. အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ကို ဒီလိုအဆိုးမြင်ပြီးလက်သီးပုန်းထိုးနေရုံ နဲ့ တည်ဆောက်လို မရပါ .. Thank !
Nya MoeApr 20, 2012 03:12 PM
Why not? Her back is welcoming our huge cocks! Yum….
graceApr 4, 2012 06:51 PM
တစ်ချို့ဓါတ်ပုံဆရာတွေကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀မြောင်းထဲရောက်လို့ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ မော်ဒယ်လေးတွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ။ ရွှေစင်က မျက်နှာလေးအတော်လှပါတယ်။ သို့သော် တစ်ကိုယ်လုံးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တန်းမ၀င်ပါဘူး။ ပုလတက်လေးမို့လို့ရယ် အရိုးအဆစ်အချိုးအစားက ပုံစံမကျတာမို့လို့ရယ်ပေါ့။ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဟာSexyဖြစ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီလိုအပေါစားပို့စ်တွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ သူဒီပုံအတိုင်းဆက်သွားရင် သူ့အတွက် နေရာတစ်ခုတော့ရောက်မှာ ရမှာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီနေရာကတော့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့နေရာမဟုတ်တာတော့ သေချာမှာပါ။
johnkolatApr 7, 2012 09:30 AM
Cow Boy From HellApr 10, 2012 09:56 AM
ခများ ဖင်ခံလိုက် Grace ဒါ မြန် မာ့ အမျိုးသမီး ယဉ်ကျေးမှုဆိုဒ် ကို ဝင်ကြည့် နေတာ မဟုတ်ဘူး .. ဒါကိုသိရဲ့ သားနဲ့ အစကတဲက ဒီဆိုဒ် လိပ်စာကိုရိုက်ထည့် ပြီးဝင်မလာသင့် ဘူး
တမင်ပြောကိုပြောချင်လို့ ဝင်လာတာ ဆိုရင် တော့..ခများပါးစပ်အတွက် တစ်ခုခုစီစဉ်ပေးမယ်
.. ဒီမှာ တစ်နေရာထဲ ကိုကွတ်မကြည့် နဲ့ ဗျ .. အားလုံးကိုဖြန့် ကျတ်ကြည့် ..
Stay Local Play Globel ဆိုတဲ့ စကားကို ခေါင်းထဲထည့် ထား
paulApr 10, 2012 07:12 PM
That guy above is damn rude andalowlife!
Cow Boy From HellApr 11, 2012 02:31 AM
yo ! mtfk … at least i aren’t assaulting the artists and models those who managing their own career by not hunting other people life including yours … it is obvious i am opposing that rude comment … since you are having affection with those Hater … i think those Hater had fucking your ass foraperiod of time
u are pathetic gay ………………………
paulApr 11, 2012 03:35 AM
Who was rude first. It’s obvious! If you are opposing the rude comments, you’d better avoid using those too such as mtfk or whatever the similar meaning of that. I won’t reply whatever you wrote back. Like your username, better go to hell right away!
Cow Boy From HellApr 11, 2012 10:52 AM
Don’t you know mtfk word deserve you right.My user name refer fromasong title as made famous by Pantera.you really are pathetic..Thank you for not replaying me coz i am bit tired of ur noisey barking.Do you wanna know who really was rude first??
People those who giving bad comments and trying to vote down artists life…But one thing funny is hater don’t dare to assault artists and models in person.FUCK !┌∩┐(◕_◕)┌∩┐the haters﻿
Cow Boy From HellApr 12, 2012 10:45 PM
now u know who rude first ..next time before u say smth ..u better learn first what was really going on here u dickhead.
jo peterApr 30, 2012 10:46 PM
cbfh is cool.. I like his thinking, his point of views and comments above that make sense to me…
orangeloverApr 5, 2012 01:47 AM
Cow Boy From HellApr 10, 2012 10:01 AM
i bet ur mommy play nice on bed .. huh ?
ခွန်နောင်းလေးApr 6, 2012 07:19 AM
popular ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်နိုင်သလို မကောင်းတဲ့နေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။
nayyanmoeApr 7, 2012 11:49 PM
အ၇မ်းကို ဖီးလ် တက်နေတာ လား
june fridayApr 8, 2012 04:53 PM
သူလေး ကောင်းနေတယ် ဘာကေင်းသလဲ မမေးလိုက်နဲ့နော်
Mr.PeepApr 16, 2012 11:02 AM
Dear Shwe Sin
If you becomeaStar 1 day , That will beaporn star.
AungApr 16, 2012 05:34 PM
Shwe sin,If you haveanake photo,send me please
win kyawApr 17, 2012 07:29 AM
Falling down myanmar culture!who cn save?
JunnineApr 17, 2012 03:07 PM
Lady and gent-men 2012 Myanmar girls are enough of jerking.
mingalar ba!Apr 20, 2012 12:02 PM
never blame all myanmar girl,i belief that you too may have sister or mother,so say “SOME MYANMAR GIRLS ARE FALLING DOWN IN THE CULTURE WITH THEIR MORALITY”; don’t mind on my message,i’m trying to build up myanmar culture with the comment! kyezu!!
Dr.NoApr 20, 2012 08:36 PM
Whatever , that’sanice sexy shoot!
Joker layApr 24, 2012 01:00 AM
ဆိုးလိုက်တာနော် ဘယ်လောက်လဲ shwe sin
maungApr 27, 2012 10:44 PM
crazy tawe pal kwar.
thitsarApr 30, 2012 10:38 PM
a yan hot tal kwar.chit twar b
yehtunApr 4, 2012 10:02 AM
မြန်မာ ဟုတ်ရဲ့ လားဗျ ၊ ပုံကိုကြည့် ရတာ မြန်မာ မဟုတ်ဘူးထင်တာ…. ရိုင်းလို့
yehtunApr 4, 2012 10:04 AM
ဘာပုံ စံရိုက်ထား တာလို့ ထင်ကြလဲဟင်……
seinApr 4, 2012 10:30 AM
ဖာပုံ စံရိုက်ထား တာလို့ ထင်တာပါပဲ ဂျာ၊ အိမ်ထောင် ကျဘူးတယ်၊ ကြေးစာ လုပ်နေတယ်၊ နာမည်ကြီး ဓါတ်ပဲဆရာကြီး နဲ့ အိပ်ဘူးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါမျိုးပုံ တွေ ရိုက်ရဲတယ်
banana julyApr 4, 2012 06:51 PM
ရိုင်းတယ်ဆိုရင် မင်းတို့က ပိုရိုင်းတာ သိလား… နိုင်ငံတကာ မဂ္ဂဇင်းတွေ မဖတ် မကြည့်ဘူးထင်တယ်…နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ဘောင်တန်းချင်တယ် ဆိုရင် ဒီလိုအမြင်တွေ သိပ်မထားတာ ကောင်းမယ်… တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုငးမှာ အကောင်းရှိသလို အဆိုးလဲရှိတယ် ဒီလိုပဲ.. အဘက်ဘက်က တွေးကြည့်ရင် ဒီလို ပုံရိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ.. ရင်ဖုံးနဲ့ထမင်နဲ့ပဲ နေချင်ရင် မင်းတို့တွေ ဟော်လီးဝုဒ်တို့ ဘောလီးဝုဒ်တို့ ဘယ် ၀ံဆံ့နိုင်မလဲ… ဆော်ရီးပဲနော်..
THApr 4, 2012 07:01 PM
အပေါ်က ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့တူတယ်။ ခင်များ သူ့ပုံတွေကို သေချာကြည့်။ ပုံတွေအားလုံးနီးပါးမှာ ပါးစပ်ကြီးကိုအမြဲလိုလိုဟထားတာကို တွေ့လား! အဲဒါကိုကြည့်တာနဲ့ အဲဒီဓါတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့မော်ဒယ်အရည်အချင်းကိုသိနိုင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဝမ်းစာဘယ်လောက်နည်းမှန်းဆိုတာ! Sexyဖြစ်ပြီးရော ကျန်တာဘာမှမသိဘူး အဲလိုဖြစ်နေတာ
hiphopmanApr 4, 2012 09:41 PM
Cow Boy From HellApr 10, 2012 10:22 AM
အားလုံးလီးပဲကွာ .. ဒါမြန် မာအမျိုးသမီးယဉ်ကျေးမှုဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ကြည့် နေတာမဟုတ်ဘူး ..ဒီလိုပုံတွေရှိမယ်ဆိုတာသိရက်တမင်ဝင်ဝင်လာကြည့် ပြီး
ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျဘုပြောနေကြတယ် ..ရွှေစင်ကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့..အဲဒီကောင်မလေးက မင်းတို့ အနားကိုရောက်လာပြီး ကိုကိုရယ်အတူတူအိပ်ချင်တယ်လို့ ပြောရင် ငြင်းမဲ့ ကောင် တစ်ကောင်မှမပါဘူး ..ပါးစပ်ကြီးတွေအဖြဲသားနဲ့ လိုက်သွားမဲ့ ကောင်တွေချည်းပဲ ..စပျစ်သီးကို ကိုယ်မစားရတိုင်းချဉ်တယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ အီစွတ်ပုံပြင်ထဲ က ခွေး လို ကောင်စားမျိုးတွေချည်းပဲ …ကိုကိုယ်တိုင်က မြန်မာသီချင်းကြီးနားထောင်တဲ့ ကောင်တစ်ကောင်မှမပါ ..တိုက်ပုံနဲ့လုံချည်ဝတ်တဲ့ ကောင်တစ်ကောင်မှ မပါ ..သင်္ကြန်မှာ သပြေခက်နဲ့ ရေပက် တဲ့ ကောင်တစ်ကောင်မှ မပါ ….မြန်မာအသံတောင်နားထောင်ဖူးရဲ့ လာ့း မသိဘူး .. နိုင်ငံခြား MTV ကြည့် ..ဝတ်တော့ Jean နဲ့ ကိုရီးယားမျိူးမစစ်ပုံစံ .ထိုင်တော့ နိုင်ငံခြားပုံစံ ကော်ဖီဆိုင် .. မင်းတို့ တွေ စောက်ပါးစပ် က ပြောနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ဘယ်ခောတ်က ပေတံနဲ့ တိုင်းတာလဲ …အဆိုးမြင်သူတွေအားလုံး လီးပဲ ..
THApr 10, 2012 07:04 PM
မှန်တာတွေရေးထားတာဖတ်ပြီး ပေါက်ကွဲနေလိုက်တာ။ အဲလိုအရိုက်ခံရဲရင် အဲဒီမော်ဒယ်ကော အဲဒီဓါတ်ပုံဆရာပါ အဝေဖန်ခံရဲရမယ်လေ။ အနုပညာအခံမပါတဲ့ ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလိုဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ချီးကျူးခံချင်နေတယ်။
ရွှေစင်ဆိုတဲ့မော်ဒယ်က ဘာမို့လို့လဲ။ သူခေါ်တိုင်း ယောက်ျားတိုင်းလိုက်မယ် မင်းထင်တာ အတော်ရယ်ချင်စရာပဲ။ သူခေါ်လို့ သူ့ကို တစ်နာရီလောက်သုံးလိုက်ရင်တောင် စကားထဲထည့်ပြောစရာတောင်မလိုဘူး။ အခြောက်တောင် သူ့နေရာယူလို့ရတယ် နားလည်လား။ ယောက်ျားဆိုတာ စာဖတ်သူများခွင့်လွှတ်ပါ..အပေါက်ပါရင်စွပ်ချင်တဲ့အမျိုးတွေ ၀ါးလုံးခေါင်းတောင် လွတ်ချင်မှလွတ်မှာ။
မင်းကြည့်ရတာ ဓါတ်ပုံဆရာများလား ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမော်ဒယ်အောက်ဆွဲများလား။ မင်းကို ဖတ်ဖူးတာလေး ပြောမယ်။ လူထုထဲ ကိုယ့်ဟာတွေကို..ဆိုပါစို့ အနုပညာ..ချပြပြီဆို အဝေဖန်ခံရဖို့သေချာပြီ။ အဝေဖန်ခံရပြီဆို စဉ်းစားရမယ့် လုပ်ရမယ့်ဟာ ၃မျိုးရှိတယ်။
၁) ကိုယ်လုပ်နေတာကို ရပ်လိုက်ဖို့( give up)
၂) ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်လုပ်ဖို့ (neglect)
၃) ဘာများပြောစရာဖြစ်နေပါလိမ့်လို့ သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်စရာတွေ့ရင် ပြုပြင်ပြီး ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ပါ။ မတွေ့ရင်လည်း အရင်အတိုင်းပဲပေါ့။ (analyze & improve)
နံပါတ်၁က ပျော့ညံ့အားနည်းရာ ရောက်တယ်။
နံပါတ်၂က တခါတလေ ကိုယ့်အားနည်းချက် (ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့) မမြင်ဘူး ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
နံပါတ်၃အချက်ကတော့ ရေရည်အတွက်သိပ်ကောင်းတယ်။ အဲဒီအတွက် candid adviceတွေ ဘေးကနေ ဘက်မလိုက်တမ်းပေးမယ့် မိတ်ဆွေကောင်းလိုမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မညှာမတာ သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။
မင်းအရေးအသားကြည့်ရတာ မင်းဘယ်လိုကောင်စားလဲ စာဖတ်သူတွေကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ မင်းရဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ အများပြည်သူမြင်နိုင်ဖတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာရေးပြီး ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုကိုယ်ဖော်ပြနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ရွှေစင်ဟာpornstarဖြစ်မယ် porn-siteမှာအဲလိုတွေလုပ်ပြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှအထူးတလည်ဝေဖန်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိုက်ဖက်နေလို့။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ လုပ်နေတာတော့အနုပညာရှင် ပြနေတာက Myanmar celebrity siteမှာ။ celebrityဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းကို သေချာမသိရင် ဒီဆိုဒ်ဟာမင်းသားမင်းသမီးအဆိုတော်မော်ဒယ်တွေအတွက်ပဲ ထင်နေဦးမယ်။
Cow Boy From HellApr 11, 2012 10:28 AM
လွပ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာ လွပ်လပ်စွာ ဆဲဆိုခွင့် မှ မဟုတ်တာ .. ရှင်းနေတာပဲ …မင်းပြောတဲ့ အပြုသဘောဝေဖန်ရေးဆို တာ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ခု ပါလဲ လိုက်လဲရှာကြည့် ဦး .. မော်ဒယ်တွေ ဟိုလိုပုံစံလုပ်ပြလဲ ဖရုသဝါစာ ..ဒီလိုပုံစံလုပ်ပြလဲ ဖရုသဝါစာတွေပဲ လိုက်ပြောနေကြတယ် .. ဒါလားယောက်ကျားအလုပ် … မြန်မာအကျင့် အတိုင်းပုဆိုးချူံကြားထဲက လက်သီးပြပြီးဝေလေလေနဲ့ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းနေကျတဲ့ ကောင်တွေကြီးပဲ ။ မိန်းခလေးတွေကိုကျတော့ အမနာပ ပြောပြီး ကိုယ့် ဘက်ကိုပြန်ထိတဲ့ စကားကျတော့ မင်းကချက်ချင်းပြန်ကိုက်တက်တယ်။ဖရုသဝါစာကွန်မန့် ပေးတဲ့ မင်းဖအေ တွေ ပထွေးတွေအားလုံးကိုအရင်ဆုံးမလိုက်ဦး ..အပြုသဘောဝေဖန်ရေးဆိုတာဘာလဲလို့။ ပြီးမှ မော်ဒယ်တွေကိုဆုံးမဖို့ ကြိုးစား …။မင်းသိလား မှန်တိုင်းရေးလို့ ကောင်းတာမှ မဟုတ်တာ ..။မင်းအဖေနဲ့ အမေ မိတ်လိုက်ပြီးမင်းကိုမွေးလာတာ မှန်ပေမဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးပြောနေလို့ ကောင်းမလား..။ အခြောက်တောင်သူ့ နေရာယူလို့ ရတယ်ဆို တော့ မင်းရဲ့ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကို ငါနားလည်လိုက်ပါတယ် ..။မင်းပြောတဲ့ ပုံစံက မသိရင်မင်းပဲ လောကပါလတရားတွေ ကိုနားလည်သဘောပေါက်နေသလို၊ရှင်မဟာရဌသာရဆုံးမစာတွေပဲအလွတ်ရနေသလိုလိုနဲ့ …တကယ် တော့ မင်းရဲ့ စိတ်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းလဲမင်းကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်.. လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမှောင်ဘက်တစ်ခြမ်းစီ ရှိကြတဲ့ လ တွေပဲ ဆိုတဲ့ စကားအရ မင်းလဲ မကောင်းတဲ့ စိတ်ရှိမှာပဲ ..ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြစ်မကင်းပဲနဲ့ …သူများသားသမီးကိုယ်ချင်းမစာပဲပြောတာ တော်တော် ချီးကျူးဖို့ ကောင်းတာပဲ ..။ (အရေးအသား …..စာဖတ်သူ …အများပြည်သူ ..) အဲဒီစကားတွေ က တော်တော်ဟာသမြောက်တယ် …မင်းကိုမင်းဘာထင်နေလို့ လဲ …စာရေးဆရာဖြစ်ချင်နေလို့ လား ..ဒါဆိုလဲ အိမ်သာသုံးစက္ကူနဲ့ ကိုယ် ဘာသာကိုယ်အရေးကျင့် ပါလား ..မင်းပြောသလိုအများပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေရာမှာ ဘာလို့ လာ ပြီး ဟန် များ နေရတာလဲ …မသိရင်မင်းက ချင်းတွင်းတို့ စံပယ်ဖြူတို့ မှာ ပင်တိုင်ရေးနေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်လေသံနဲ့ .ငါ က ရိုင်းတယ်လို့ ထင်နိုင်ပါတယ် ..ဒါပေမဲ့ မင်းက တော်တော် ဟန် များတဲ့ ကောင်ပဲ ..ဒါနဲ့ မသိလို့ မေးပရစေကွာ ..ဒီမော်ဒယ်တွေအားလုံးဘာပဲလုပ်ပြပြ မင်းတို့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ဘဝတိုးတက်ရေး ကို ဘာ တွေများလာထိခိုက်နေလို့ လဲ …သူ့ ဘဝသူ့ အကြောင်းအချိန်တန်ရင်သူ့ သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပျက်သွားမှာပဲ …အကြံပေးမယ်ကွာ ..ဒီပုံတွေကြောင်းမင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် နောက် ဒီဆိုဒ်ထဲ ကို ဘယ်တော့ မှဝင်မကြည့် ပါနဲ့ ..ကြည့် မိလို့ ပုံတွေ့မြင်ခဲ့ ရင်လဲ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် သက်ပြင်းလေးချ ..ခေါင်းလေးခါ ပြီး အေးအေးနေ..ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ မင်းပါးစပ်နဲ့ လက်လှုပ်ချင်ရင် တော့ သူများလဲ လိုက်လှုပ်လို့ တယ်ဆိုတာ မှက်ထား .. စကားမစပ် ..လီးပဲကွာ…
THApr 11, 2012 06:39 PM
လွပ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာ လွပ်လပ်စွာ ဆဲဆိုခွင့် မှ မဟုတ်တာ .. ရှင်းနေတာပဲ …မင်းပြောတဲ့ အပြုသဘောဝေဖန်ရေးဆို တာ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ခု ပါလဲ လိုက်လဲရှာကြည့် ဦး
ဘယ်သူကဆဲဆိုနေတာလဲ။ မင်းလား ငါလား။ ငါရေးထားတဲ့စာကို သေချာဖတ်..ပြီးမှလာပြန်ရေး။ ငါရေးတဲ့စာတွေမှာ ဆဲတာပါလို့လား။ ရိုင်းစိုင်းစော်ကားတာပါလို့လား။ မင်းရေးတာတွေမင်းပြန်ဖတ်ပြီးလည်း ပြန်သုံးသပ်လိုက်ဦး။ တစ်ခြားကော်မန့်တွေလို ပြည့်တန်ဆာသာသာသဘောထားပြီး နှမသားချင်းမစာနာဝေဖန်ထားတာတွေကိုတော့ အရသာခံနေပြီး ပြန်မချေပဘူး။ ငါရေးတဲ့ကော်မန့်ကိုကျတော့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းလာဆဲနေတယ်။ မင်းလိုချင်တဲ့ကော်မန့်က ဘယ်လိုအတန်းအစားမှန်း သိသာတယ်။
မင်းကြည့်ရတာ ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့တူပါတယ်။ ငှေးဝင်းတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော့။
မင်းတောင် ဖရုသာဝါစာမပါပဲ စာမရေးတတ်တာ သူများဆီကမျှော်လင့်နေသေးတယ်။ ငါကော်မန့်တွေရေးဖူးတယ်အများကြီး။ ဘယ်တော့မှ အောက်ပိုင်းစကားလုံးမသုံးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေကိုလေးစားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လေးစားလို့။
ရွှေစင်ရဲ့တစ်ခြားဓါတ်ပုံတွေကိုဝေဖန်ထားတာတွေ မင်းဖတ်ပြီးပြီလား။ သူဟာ အမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့ကော်မန့်ချည်းပဲ ရနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုဘာလို့လူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြလဲ မင်းနားလည်လား။ သူဟာ ဝေဖန်ချင်စရာကောင်းနေလို့ပဲ။ တစ်တစ်ချက် အမြှောင်လိုလိုဘာလိုလိုမို့၊ သိပ်ကြွားလို့၊ ပြောတော့intellecturalတွေမှဖတ်တယ်ဘာညာစကားကြီးစကားကျယ်ပြောပြီး လုပ်ပြနေတာကပြောင်းပြန်တွေမို့လို့…။ တစ်ခြားမော်ဒယ်တွေကိုဝေဖန်ထားတာတွေကိုကော ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သူနဲ့ကပ်လျှက် ဖွေးဖွေးကိုပဲကြည့်လိုက်။ ဘယ်လိုကော်မန့်လေးတွေရထားလဲဆိုတာ။
မိုးဟေတို့ ၀တ်မှုန်တို့လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား အဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲ။ ထိပ်တန်းမှာလေ။ သူတို့မှာအနုပညာဝမ်းစာကလဲပြည့်လာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းထူးခြားတော့။
မင်းကြည့်ရတာ မင်းအမေနှမတွေကို အတော်ချစ်ပုံရတယ်။ မိန်းမသားတွေကိုကာကွယ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိတာကို သုံးသပ်ပြီးမှန်းကြည့်တာပါ။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားတယ်။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဟိုဘက်ကော်မန့်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ချင်တာနဲ့ တစ်ခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆဲတာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့)။ ၀ါးလုံးသုတ်ပတ်ရမ်းတော့ ငါလို မျှမျှတတရေးတဲ့သူတွေက မင်းဘက်ကနေ လွှင့်သွားတာပေါ့။ ရေစက်ပါလို့ စာရေးရင်းအင်တာနက်မှာဆုံကြတာ အမုန်းမပွားတာအကောင်းဆုံးပါ။ သူ့ကိုယ်ဆော် ကိုယ့်သူဆော် ဘယ်သူမှအကျိုးမများပါဘူး။ အချိန်ကုန် အန်နာဂျီကုန်…။
ktmApr 23, 2012 02:56 AM
ခင်ဗျားတို့ဗျား သူ့ကိစ္စကိုများ အရေးတရူလုပ်ပီတော့ စကားများနေကြသေးတယ် အဲနေရာမှာသာ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် အကျိုးရှိတာလေးကို အချိန်ကုန်ခံပီးပြောကြရင်
ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ခုတော့ ဟိုကောင်မမပြောနဲ့ မြင်သူတိုင်းခင်ဗျားတို့ပြောနေတာကိုကြည့်ပီး ရီချင်တယ် ဟိုကောင်မကတော့ ကျေနပ်နေတော့မှာပဲ မိန်းမဖြတ်ရင် ပြည်ပျက်တက်တယ်နော်………
Cow Boy From HellApr 30, 2012 03:33 AM
ပုဇွန်ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်ရဲ့.. တကယ်တေ့ာ ရွှေစင်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။THဆိုတဲ့ အခြောက်
က..သူထက်ရှကြောင်း၊လိမ္မာကြောင်း၊ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းမွန်ကြောင်းသူများရှေ့ချပြချင်လို့ ရေးတာ။ငါကတော့အဲဒီကောင်ရဲ့ ဆရာသမားလေသံကိုအမြင်ကတ်လို့ တမင်သက်သက်လိုက်တိုက်ခိုက်တာ။သူကလုပ်ရဲရင်ဝေဖန်ခံရဲရမယ်ဆိုပြီးဆဲတဲ့ ကောင်တွေကို ကာကွယ်ပြောနေသေးတယ်။ငါတို့ ရေးတာကိုလူတိုင်းကကြည့် တယ်လို့ မင်းက့ ပြောတော့ငါမျက်ခုံးတောင်နဲနဲပင့် သွားသေးတယ်။ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်လို့ ဘာမှမပြောတော့ ပါဘူး။မေးချင်လို့ အဲဒီလိုမင်းကပြောနိုင်ရအောင် အဲဒီလူတစ်ကာနဲ့ မင်းက အတူတူဒီကွန်မန့် တွေကိုဖတ်ကြတာ လား ???? ။မင်းတို့ အမြင်မှာဟာသဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ စိတ်မနှံ့ သူရဲ့ အမြင်မှာတော့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးက ကမောက်ကမနဲ့ ဟာသဖြစ်နေတာချည်းပဲကိုး ..။
Cow Boy From HellApr 30, 2012 04:24 AM
TH ဆိုတဲ့ ကောင် ကို ပြောတာ ………… ငါရိုင်းတယ်အဆိုးမြင်ကွန်မန့် ရေးတဲ့ သူတွေအတွက်ရိုင်းတယ် ..အဲဒီလူတွေအားလုံးထက်မင်းကပိုဆိုးတယ်..ဘာလို့ လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ တွေဘက်က ကာကွယ်ပြောနေလို့ ။ရိုင်းတဲ့ ကွန်မန့် တွေကိုပြန်မရေးပဲ မင်းကိုမှဘာလို့ ပြန်ရေးရလဲဆိုတော့ မင်းကွန်မန့် တွေကဆရာကြီးလုပ်တဲ့ လေသံတွေသိပ်ပါနေလို့ ။မင်းသာညဏ်ခံပြည့် ဝပြီးကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိရင် မိန်းမတစ်ယောက်လုပ်တာတွေမျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့် ၊သူပြောတာတွေလိုက်မှက်ထားပြီး လိုက်အပြစ်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး ..ကိုယ်တိုင်ကဆောက်တစ်လွဲလုပ်ပြီး သူများတွေကိုဆရာလိုက်လုပ်နေတာ ဟာသ သက်သက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။မင်းကိုရေးတော့ မခံချင်ဖြစ်ပြီး မင်းချက်ချင်းပြန်ရေးတယ်မဟုတ်လား …ရွှေစင်ကိုဆဲတာတွေရေးတာရေသူများကခံနိုင်မလားကိုယ်ချင်းစာကြည့် လေ..အဲလိုရေးတဲ့ ကောင်တွေဘက်ကမင်းကထောက်ခံနေတယ်ဆို တော့သူတို့ တွေကိုမင်းကအလှည့် ကျစုပ်ပေးနေရလို့ လား ..။ (စာဖတ်သူများ)(ဝါးလုံးသုတ်ရမ်းတော့ ငါ့ လိုမျှမျှတတရေးတဲ့ သူတွေကမင်းဘက်ကလွင့် သွားတာပေါ့ ) မင်းအဲလိုရေးထားတာဖတ်ရတော့ဘုရားရေ ဟေ့ ကောင်မင်းရေးနေတာ ကွန်မန့် စာမျက်နှာတွေနော်စာပေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာရေးနေတာမဟုတ်ဘူး ..ဆောပေါက်ရဲ့ ။
စားများများရေးချင်တယ်ဆိုလဲအိမ်သာနံရံတွေမှာလိုက်ရေး ….။ဒီမှာမင်းရဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက်ဒသနတွေလာချပြမနေနဲ့ ..မင်းပြောသလိုမင်းရေးတာတွေသေချာဖတ်ကြည့် တော့ မင်းကလူအထင်ကြီးခံချင်တဲ့ဟန် များတဲ့ အခြောက်တစ်ယောက်ပဲ ဆိုတာသိသာတယ် ..မင်းဘာလို့ ဓါတ်ပုံဆရာကိုခဏခဏထည့် ရေးတာလဲ ..မင်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာကြည်းချက်ရှိလို့ လား ..ဒါမှမဟုတ်မင်းနာကြည်းရအောင် သူကမင်းဖင်လာချ ထားဖူးလို့ လား ..ကွန်မန့် တွေအများကြီးရေးဖူးတယ်လို့ မင်းမို့ လို့ မရှက်တမ်းဝန်ခံတယ် ..ဟုတ်တယ် ဒါတော်တော်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ် ..မင်းမှာ ပရိတ်သတ်တွေရှိတယ် မင်းကတရားမျှတ တယ် ..ဒီလိုမျိုးမင်းကြားချင်တာမဟုတ်လား .. မင်းဖင်ဆောင့် သာ သေလိုက်တော့ 
graceMay 1, 2012 05:49 PM
Sရူးကြီး ပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့ရေးထားတဲ့အရေးအသားက လိုက်ဖက်မှုကကွက်တိပဲ။ အောက်တကာ့အောက်ဆုံး
shwemanthuApr 4, 2012 11:26 AM
koApr 4, 2012 12:52 PM
ဒါတောင် စာပေစိစစ်ရေးရှိလို့နော် ဟင်းဟင်း မဟုတ်လို့ကတော့ Play boy မဂ္ဂဇင်း မြန်မာမှာထုတ်လို့ရပြီ တကယ်ထုတ်ခွင့်ပေးရင် တကယ်လုပ်မယ့်မြန်မာမလေးတွေပဲဗျ ဇကတော့ မသေးကြဘူး ..ဘာပဲပြောပြော အနော်တို့အတွက်တော့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဂျ ဟီးးးးးးးးးးး
koApr 4, 2012 12:53 PM
KandawgyiApr 4, 2012 04:54 PM
Play Boy Magazine Shoots–Nice posts for Play Boy Magazine or Maxim Magazine Posts.
What is next step for girls in Myanmar after Amay Su’s Demoracy? JAH JAH JAH
banana julyApr 4, 2012 06:56 PM
ဒါလေးနဲ့တော့ အမေစုကို အလုပ်မရှုပ်ခိုင်းပါနဲံ့နော်.. ဒါတွေက ရုပ်ရှင်လောက နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ရုပ်ရှင်လောက မှာတော့ ဒီလိုပဲံလို့ထင်တယ် ဒါထက်ဆိုးတာတွေတောင်ရှိနေတာပဲ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဆိုတာ လုံခြုံတာ ပိုပီးသင့်တော်တာပေါ့.. ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြား မော်ဒဲလ်တွေဆို ဒါထက်ဆိုးတာ ပဲ ..Playboy တွေက တော့ တမျိုးလေး မော်ဒဲလ်နဲံ့မတူပါဘူးဟာ….
kyiApr 4, 2012 06:57 PM
She think she is beautiful. Look at her skin at the back and lap. Full of cellulite and saggy. She must gave birth before and she never take care of her skin. She is not deserve with Model title.
Mg HanApr 4, 2012 07:44 PM
banana julyApr 4, 2012 06:51 PMရိုင်းတယ်ဆိုရင် မင်းတို့က ပိုရိုင်းတာ သိလား… နိုင်ငံတကာ မဂ္ဂဇင်းတွေ မဖတ် မကြည့်ဘူးထင်တယ်…နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ဘောင်တန်းချင်တယ် ဆိုရင် ဒီလိုအမြင်တွေ သိပ်မထားတာ ကောင်းမယ်… တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုငးမှာ အကောင်းရှိသလို အဆိုးလဲရှိတယ် ဒီလိုပဲ.. အဘက်ဘက်က တွေးကြည့်ရင် ဒီလို ပုံရိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ.. ရင်ဖုံးနဲ့ထမင်နဲ့ပဲ နေချင်ရင် မင်းတို့တွေ ဟော်လီးဝုဒ်တို့ ဘောလီးဝုဒ်တို့ ဘယ် ၀ံဆံ့နိုင်မလဲ… ဆော်ရီးပဲနော်”
you should say like that, normally it is out of Myanmar Religion Custom does dare to impress to public. if it was privacy, the concerned party should keep as rememberance but not upload to public.
mal!saApr 4, 2012 08:06 PM
ekk~~!!!! bar kyee mhan ma ti wooo
mal!saApr 4, 2012 08:12 PM
mone sa yar kyee
x000 x00 x000 disgusting~~!!!
KandawgyiApr 4, 2012 10:56 PM
What exactly is Myanmar Custom, anyway? I mean, realistically, not every Myanmar likes to help each other,right? So, in other words, the model posting is done to ridicule the Myanmar custom and culture and Myanmar people–what exactly is the Myanmar custom? Jah Jah Ha
HeroApr 5, 2012 01:47 AM
အပေါ်က mg han က တော်တော် သိတယ်နော်
HeroApr 5, 2012 01:54 AM
mg han ရေ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံသိလား အနုပညာဆိုတာ အနုပညာ ဆန်တာပဲကောင်းပါတယ်။ သူများသားသမီးကို မကောင်းပြောချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ ရွှေဇင်ကလည်း STEP ကတက်လာတုံးကတော့ ကုန်းချောင်းချောင်းနဲ့ ပြိးတော် ဖော်စရာရှိတာကို ဖော်တော့တာပဲ။ IT time journal မှာဆိုရင် သူရဲ့ဟိုဟာက သူ့ခေါင်းထက်တောင်ကြီးနေတယ်။ ရွှေစင်ရေ အပေးအကမ်းသိပ်မယက်ရောနဲ့ သိလား။ ရွှေစင် အနုပညာလုပ်တာရယ်လို့ သိပ်မတွေ့ဘူး။ သူ့မှာရှိတာဖော်ပြီး ပြနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလုပ်နေရုံနဲ့ မင်းက အဆင့်တန်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးရွှေစင်ေ၇။
eu geanApr 5, 2012 05:06 AM
feel pal.. feel pal..
Kyaw KyawApr 5, 2012 05:16 AM
LOOK NICE BUT NOT FOR TRADITIONAL EYES
သခါင်္ရApr 5, 2012 06:25 AM
သူမ ဟာ $………………
nyinyiApr 5, 2012 07:25 AM
အဟမ်း ၇န်တော့မဖြစ်ကြပါနဲ့ သူတို့ လေးတွေ ၇ှိလို့ ဘဘတို့ အသက်၇ှည်တာပါကွယ် ဆက်၇ိုက်ပါ အားပေးပါတယ် စပွန်ဆာလုပ်ပေးလိုက်ချင်တယ် ကောင်းပါ့ကောင်းပါ
nyinyiApr 5, 2012 07:26 AM
သူ့ ၇ိးစားနဲ့ တွဲ ကစ်ထားတဲ့ ၇ှိ၇င် တင်ပေးပါလား ကွယ် ဘဘ အ၇မ်း ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ပါကွယ်
adolfdillingerApr 5, 2012 10:10 AM
whatever she is sexy!!! i vote
adolfdillingerApr 5, 2012 10:16 AM
naingmyoApr 5, 2012 12:20 PM
aungaungApr 5, 2012 06:42 PM
ဖေါ်တာကုို အပြစ်မပြောလုိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖေါ်ပုံက မလှဘူး။ အနုပညာမပါတာ။ နောက်ပြီး သူ့အချိူးအဆက်က မလှဘူး။ အရပ်သိတ်ပုတာလည်း တကြောင်းပဲ.နောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း သေသေချာချာလည်း လုပ်ပုံ မပေါ်ဘူး။
မန္တလေးသူဆုိုတော့ အနောက်တုိုင်းဆန်ချင်ပေမဲ့ ဘယ်လုိုဆန်ရမှန်း မသိဖြစ်နေသလုိုပဲ။ ရန်ကုန်က မော်ဒယ်တွေကုို ကြည့်ပါ။ အရမ်းကွာပါတယ်။
kothetApr 5, 2012 09:59 PM
ma ma shwe sin yae body naked photo tin pay par lar byar ma ka sexy pe\_ naw
Zayar HeinApr 6, 2012 12:24 AM
နိုင်ငံတကာ နဲ့ ယှဉ်တာကလည်း ယှဉ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲ့လောက်ကြီးတော့ sexy ဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးလား လို့ . . .
tin ko mgApr 6, 2012 01:47 AM
မစားခင် ရိုက်ထားတာထင်တယ် (ထမင်း)
sonApr 6, 2012 02:37 AM
sait lar tel..ma ka ning bu..
MalaysiaApr 6, 2012 04:54 AM
there is nothing in her action only sex and fuck action, the first photo is like she is making sex with something right?
king loveApr 6, 2012 08:36 AM
pieApr 6, 2012 08:50 PM
နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလို နာမည်ကြီးချင်တယ် အတုယူချင်တယ်ဆိုရင် ..အရည်အချင်းဆိုတာရှိသင့်တယ်။ နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလှတာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လှတယ် , အသားအရည်ဝင်းတယ် , ရုပ်ဖြောင့်တယ် , style လန်းတယ် ။ တော်တော်များမျာ့းမြန်မာ မင်းသမီးတွေက body မရှိဘူး.. အသားမည်းတယ်, ရုပ်မဖြောင့်ဘူး, style တုံးတယ် ။ quality ချင်းကွာတယ် ။ အခုလိုရိုက်နေတယ့်ပုံတွေက မင်းသမီးတစ်ယောက်လိုမဟုတ်ပဲ.. $ လိုချင်လို့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာအထင်းကြီးပါပဲ ။ ခေတ်ဆန်တယ့်လူ နဲ့ ခေတ်ပျက်တယ့်လူနဲ့ဆိုတာ ကွာတယ် ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ .. ကိုယ့်ဘာကိုယ် နှိမ့်ချမှရတာ .. ဘယ်သူ့မှမနှိမ့်ချနိုင်ဘူး.. ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် ကိုယ့်ဘာကိုယ်နှိမ့်ချတယ့်မိန်းကလေးဆိုတာလည်း.. အခုခေတ်နဲ့ ပြောရရင် မဆန်းတော့ဘူး ။ ခေတ်မပျက်သေးဘူး.. လူတွေပျက်နေတာ .. ခေတ်ပျက်နေတယ်လို့ပြောကြတာလည်း.. ပိုက်ဆံကြောင့်ပျက်နေတာ ..
yanmyoaungApr 7, 2012 12:22 AM
maungApr 7, 2012 07:59 PM
JOSEPHTUNApr 7, 2012 09:54 PM
JOSEPHTUNApr 7, 2012 09:55 PM
ဘဘကျော်Apr 8, 2012 05:13 AM
ကိုယ်နဲ့လိုက်မှန်း မလိုက်မှန်းမသိ ရိုက်ချင်သလိုရိုက်ထားတာ။
ပေါင်မှာလည်း ၀ဲခြောက်တွေ၊ အနာရွတ်တွေနဲ့
သားစိတ်၊ မယားစိတ်ကုန်တယ်ကွာ။ ရွံစရာကြီး….. ထွီ
ဘဘကျော်Apr 8, 2012 05:14 AM
kyawtheinmyintApr 8, 2012 04:46 PM
ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် ဒါနဲ့ ဘဘကြော်ရေ ရွံစရာကြီးကို ကျနော့်ဆီ ပစ်လိုက်လေဗျာ ဟီးဟီး
BEAUTYApr 8, 2012 10:54 PM
စောက်ကောင်မကြီးဒင်းတို့တွေကြောင့်မိန်းမဈေးကျတာ….ဖော်မှလှတယ်များထင်နေလားမသိဘူး …..Discount ချရောင်းရင်တောင်ဝယ်ချင်စိတ်ကုန်မယ့်ကောင်မကြီး
BEAUTYApr 8, 2012 10:57 PM
သူ့အကြောင်းတွေသိနေတော့လည်း အားပေးရမှာခက်ခက်ပဲနော် သူမန်းလေးမှာဘယ်လိုနေတယ် ရေချိုးတာတွေရောအကုန်မြင်ဖူးနေတော့လည်းနော်
ရာဟုApr 9, 2012 09:10 AM
hackerApr 10, 2012 01:13 AM
her face is showing very clearly …. how she felf that time ……
Really want to vomit it ……
MalaysiaApr 10, 2012 01:16 AM
Lok Chin tal, Lee taung tal, Loe chin talk nin bal duu done.
veApr 11, 2012 11:10 AM
ဘိုထိန်Apr 11, 2012 12:45 PM
အိပ်ငိုက်နေတာပါ… ဟောက်တောင် ဟောက်နေသေး …တွေ့ဘူးလား ပါးစပ်ကြီး ဟနေတာ ..
ညက အိပ်ရေးပျက်တယ်နဲ့ တူတယ်… :-)
tinohApr 14, 2012 07:45 AM
let her suck black dick please come to America
aumif;Apr 15, 2012 11:10 PM
popotin1977Apr 18, 2012 01:38 AM
yon sa yar jie.yoat soe tal.hla lal ma hla boo.ho har net to tal.[kyat ma]
Horny GoatApr 20, 2012 05:11 AM
ခလေးမ ကြည့်ရတာဓာတ်ငုပ်နေပုံရတယ်။ ဓာတ်ငုပ်နေရင် ဝမ်းပျော့ပျော့သွားအောင်တုတ်နဲ့မွှေပေးရမယ်။ ဟေ ဟေဟေ့။
chartake mglayApr 21, 2012 09:35 AM
KandawgyiApr 21, 2012 02:13 PM
kyat ma pyeit!
thidawinApr 22, 2012 03:35 AM
Cow Boy From HellMay 1, 2012 09:03 AM
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ပြောသာပြော ထောက်ခံတယ်
sweetieApr 22, 2012 08:05 PM
middle pictures has headband but the rest has no
she look so bad, this is not sexy
myanmar girls think showing their iner part of their body will make sexy, i’m one of myanmar girl but surely it look disgusting
its not either american or european style
its shameless pose i think
make active and sexy syle
don’t ever dress like party style with thick makeup in hot weather
the sweat make u more ugly
androgenic manApr 22, 2012 09:57 PM
i like your comment on Shwe Sin, it is not sexy you think i accept your comment no american and no europe but it is good look for all boys and men, can you see it?
ktmApr 23, 2012 02:28 AM
ဒီလိုကောင်မမျိုးအတွက်များ စကားများရန်ဖြစ်နေကျသေးတယ် တန်လို့လား အကုသိုလ်များတယ်
ktmApr 23, 2012 02:44 AM
not like sexy, like gispy.
ktmApr 23, 2012 02:49 AM
ဒါကြီးကိုများ gorgeous တဲ့ ရေးသားတဲ့သူကလည်းရေးသေး
Naa MungApr 27, 2012 09:45 AM
Black knightApr 28, 2012 10:00 AM
ဟာကွာ….ရှုပ်နေတာပဲ….sexy photo ကိုသူဘာသူကြေနပ်လို့အရိုက်ခံတာ…ဓာတ်ပုံဆရာကလည်း..ပိုက်ဆံရလို့ရိုက်တာ…ကိုယ်ဘာကိုယ်နှာဘူးကြပီးဝင်ကြည့်ပီးတော့မကောင်းရှောက်ပြောနေတယ်..မကြိုက်ရင်လည်းဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့…င်္ယောကျားတွေဖြစ်ပီးစောက်တင်းပဲပြောနေကြတယ်…
Cow Boy From HellApr 30, 2012 03:45 AM
ခများကွန့် မန့် ကိုကြိုက်တယ် တကယ်တော့ ခများလိုအတွေးမျိုးတစ်ခြားကောင်တွေမှာရှိသင့် တယ်
စောက်ရမ်းရယ်ရ တာတစ်ခု က ဖရုသဝါစာကွန်မန့် တွေရေးထားတဲ့ ကောင်တွေ
ရွှေစင်ကိုအပြင်လောက မှာတွေ့ ရင် သူ့ မျက်နှာကြည့် ပြီး ကွန်မန့် ထဲ က လိုမျိုးသွားမဆဲရဲကြဘူး ..။ l mfa o
kokolulay01Apr 28, 2012 07:51 PM
အဖုတ်တပြားအတွက် အလုပ်မများကြစမ်းပါနဲ့ကွာ ဘာပြောလို့ရမှာလဲ ဒီခေတ်ကြီးကိုက ဒီလိုဖြစ်နေတာ ငွေလေငွေ ဘာတွေပဲပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ဒါကြောင့်ပါပဲ
kokolulay01Apr 28, 2012 07:52 PM
min thihaApr 29, 2012 06:00 AM
ဟင်းနှော် ရွေစပ်နှော် ငါ လုပ်လိုက်ရရင်တော့ဖြင့်
pinkeeApr 29, 2012 06:46 AM
masterkeyApr 29, 2012 09:50 PM
သူကကော ဘာမို့ လို့ လဲ မိန်း မပဲ လေ မိန်းမဆို တာ ပေါင်မုန့် နဲ့ တို့ စား ဖို့ မှ မဟုတ်တာ လီး နဲ့ ထိုး ဖို့ ပဲ ဟာ
nhatkhatMay 1, 2012 01:56 AM
တကယ်တော့ မိန်းမဆိုတာ မကောင်းလို့ လီးနဲ့ထိုးတာပေါ့ ကောင်းရင် ထမင်းနဲ့မြှပ်စားမှာပေါ့
ဆေးတွေများ သောက်ထား လိမ်းထားမှန်းမသိ